Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMonica
Le ndlu ibekwe kumgangatho wesibini kunye nophezulu kwisakhiwo samagumbi amathathu, kwindawo ejikelezwe buhlaza, ejongene ne-Alps. Ikhitshi lixhotyiswe kwaye lijonge i-terrace encinci.Igumbi lokulala eliphindwe kabini liqaqambile kwaye linewodrophu ephangaleleyo. Igumbi lokulala lesibini linendawo yokuphumla kunye neTV kunye nebhedi ekhululekileyo. Amagumbi makhulu kwaye akhanyayo, akhululekile kakhulu! Lo mhlaba ubandakanya iindawo ezimbini zokupaka ezibekelwe bucala
Zonke iindawo zokuhlala ziyafumaneka kwiindwendwe
Sikwiikhilomitha ezi-5 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseTurin Caselle, isikhululo sikaloliwe saseSan Maurizio Canavese sikwimitha engama-500, ngelixa iziko laseTurin linokufikelelwa malunga nemizuzu engama-20 ngemoto. IReggia di Venaria ikwalula kakhulu ukufikelela kuyo, malunga nemizuzu eyi-12 ukusuka endlwini.
Ndisesandleni sakho, ungandifumana ngefowuni, umyalezo obhaliweyo okanye i-imeyile, njengoko kuya kuba lula kuwe. Ndiza kukwazi ukukucebisa malunga nokukhenketha kwendawo, inkcubeko kunye nokutya kunye newayini.